Wp/blk/ကွန်ပျူတာ - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ကွန်ပျူတာ
ကွန်ပျူတာ (Computer) ယို ထာꩻခြွိုင်းပွုင်စမ်ႏဖေႏ လိုꩻထာꩻမဉ်လꩻ။ မဉ်ႏသော့ꩻဖေႏ ပရိုဂရမ် program တောဝ်းလဲ့ ကပွုင်သေꩻခါꩻဒါႏ အခြပ်အရဲန်ႏနောဝ်ꩻ ထာꩻခြွိုင်းယိုဗာႏ ခုမ်မာꩻဖေႏငါလွေꩻ အဗွေႏတာႏသွူ။ ကပွုင်သေꩻခါꩻဒါႏ အခြပ်အရဲန်ႏ ပရိုဂရမ် မဉ်ႏအွောန်နုဲင်းမုဲင်ꩻ ထာꩻခြုင်းယို အီးထေထန်ႏဖေႏချာ သင်္ချာဂဏန်ꩻ ယင်း ယုတ္တိဗေဒ ထာꩻစေ နုဲင်းမုဲင်ꩻသွူ။ တဖြာꩻတာႏ ခုမ်စမ်ႏ ကုမ်ပျူတာ PC (Personal Computer) တဖြုံႏအကိုယို ထာꩻခြိုင်းပေႏဖုံႏ အောဝ်ႏဒꩻ ဗွို့ꩻသော့ꩻပါ။ အမဉ်ꩻ အဲန်ႏဂလေက်နေးဖုံႏနောဝ်ꩻ CPU, memory, motherboard, hard disk, CD-RW, graphic card ယင်း Power Supply ဖုံႏ။ အလောင်းအလင်တဲ့ အောဝ်ႏဒွိုန်းနေနေ။ Keyboard, mouse, monitor ဖုံႏယို အွောန်ႏဖွုင်းလွေꩻခါꩻဗာႏ တွမ်ႏကွန်ပျူတာသွူ။ CPU အထိုနောဝ်ꩻ central processing unit, မဉ်ႏရိုꩻ ပအိုဝ်ႏနေးနောဝ်ꩻ ထာꩻခြုင်းအုံအကဲန် ဗာႏစေပန်းဖေႏဆုမ်ႏ။ Memory နောဝ်ꩻထာꩻခြိုင်း ပွိုးထူႏဆုမ်ႏဖေႏ ဆချာ ဆငါသား ကပသာလွောန်ဒါႏ ဂဏန်ꩻခြပ်ဖုံႏ။ Motherboard ယိုနောဝ်ꩻ CPU, memory, graphic card သီးဖုံႏ ခင်ႏလမ်းအုံ၊ ပါသော့ꩻတုမ်ႏ တဖြွီꩻအောင် အီးအွောန်ႏဗွို့ꩻလွေꩻ Power Supply, hard disk ယင်း CD-RW ဖုံႏအတာႏ။ Hard disk နောဝ်ꩻ ထာꩻခြိုင်းအွောန်ႏသေးဟောဝ်သော့ꩻ သော့ဖှ်ဝဲးရ် ပရိုကရမ် Software programs ယင်း လိုꩻစူခြောင်ꩻ ထာꩻလီ data ဖုံႏ။ SSD ယိုတဲ့ hard disk တမျိုꩻဒျာႏနေနေသွူ။ CD ဗွောင်ခြိုင်းယို အောဝ်ႏနီမျိုꩻ CD-ROM ယင်း CD-RW ။ ROM နောဝ်ꩻ ဒါႏဗော့ꩻ အထွားလွူꩻအီ၊ RW (read/write) နောဝ်ꩻ ထွားလꩻ တဲမ်းသော့ꩻတုမ်ႏ အခြိုင်းတဲ့လꩻသွူ။ အယမ်ထဲင်း CD-RW နောဝ်ꩻ DVD-RW၊ ထာꩻယို အတောမ်ႏသော့ꩻ အာအေားတန်။ Graphic Card နောဝ်ꩻ ဗာႏမာꩻစွူဖြွိုးဖေႏ ထာꩻယောင်ꩻ ကအီးဗို့ꩻဒါႏ monitor ယောင်ꩻဗို့ꩻပျာႏလောင်းသူꩻ။ Power Supply ယို အောဝ်ႏ AC တျာႏမေႏ ကြုဲင်းလွေꩻဖေႏ DC တျာႏမေႏထွူ တွမ်ႏတျာႏမေႏဖြွီꩻ အွောန်ႏဗွို့ꩻ ဒꩻ လွေꩻဖေႏ ထာꩻခြိုင်းကအောဝ်ႏဒါႏ motherboard, , hard disk, DVD-RW သီး တဖြွီꩻအောင်ကို။
Keyboard ကီးဘောက်ဒ် နောဝ်ꩻ လိတ်ဖြုံႏနျꩻကြဲ့ပျာႏ၊ ဗာႏတေက်သော့ꩻဖေႏ လိတ်ဂဏန်ꩻဖုံႏ အွိုး ကုမ်ပျူတာကိုသူꩻ။ design အလုဲင်ꩻအောင် အောဝ်ႏနီမျိုꩻရိုꩻလဲ့ ဝင်ꩻခုမ်အာဗော့ꩻ ကွာတီ QWERTY လုမ်ꩻသွူ။ Mouse နောဝ်ꩻ ယူးပေႏ ဗာႏအွောန် ပြာႏတူႏ ကအောဝ်ႏသော့ꩻဒါႏ ကုမ်ပျူတာ ပရိုဂရမ် ကေားယီးနယ်ထာꩻကို။ ယူးပေႏလောင်းယို အကြဲ့အောဝ်ႏ ၃ ဗာႏကေန်းအာအာ။ နျꩻစေႏ (Left click)၊ နျꩻထွေ (Right click)၊ တကလွီႏ ချာငါအီတာႏ ထာꩻကလွီႏ (wheel) ဖုံႏယို ထာꩻကြဲ့အောဝ်ႏသော့ꩻ ယူးပေႏလောင်းဖုံႏသွူ။ Monitor ယို မဉ်ႏချာႏပအိုဝ်ႏနေး အောဝ်ႏလꩻဒျာႏနေနေ။ ထွာထိုꩻ ထာꩻယောင်ꩻဆျောင်ႏ လွောန်ဗွို့ꩻ ခြွုင်းပျာႏ၊ နုဲင်း CRT monitors နောဝ်ꩻ ဆချာဖဲ့ꩻ။ 
ကွန်ပျူတာ အစောဝ်းခါ၊ ယိုခါဖုံႏ၊ ယင်း ထာꩻခြွိုင်း ခွုမ်စမ်ႏနွောင်ꩻ ကွန်ပျူတာ ထာꩻမာꩻဖုံႏ
↑ Robson၊ Eleanor (2008)၊ Mathematics in Ancient Iraq၊ ISBN 978-0-691-09182-2. p. 5: calculi were in use in Iraq for primitive accounting systems as early as 3200–3000 BCE, with commodity-specific counting representation systems. Balanced accounting was in use by 3000–2350 BCE, andasexagesimal number system was in use 2350–2000 BCE.
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/ကွန်ပျူတာ&oldid=5418792"
Last edited on 30 April 2022, at 03:02